नेपाललाई दि’ल्लीकै आदेश पर्खनेहरुले शा’सन चलाएका छन् -विनोद त्रीपाठी – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
नेपाललाई दि’ल्लीकै आदेश पर्खनेहरुले शा’सन चलाएका छन् -विनोद त्रीपाठी
आखिर, काठमाडौंले दिल्लीको निर्णय पर्खेर बसेको थियो, त्यहि भयो, जुन दिल्लीले गरेको निर्णयको केहि घण्टामै काठमाडौंले पनि त्यहि गर्यो । हो, हाम्रो खुल्ला सिमानाका कारण भारतका केहि बिषयमा हामी एकाकार हुन बाध्यता छ । तर, यो बिषय निकै नितान्त फरक थियो ।
किनकी भारतमा कोरोना फैलिएको छ । भारत ठुलो देश छ । उसलाई लकडाउन लगाउन बाध्यता छ । तर, हामीलाई आवस्यक थिएन । सिमानामा पुरै कडाई गर्ने हो । जसरी, ठुला देशहरुमा कोरोना फैंलिंदा समेत वरपरका साना देशहरुले लकडाउन नलगाएका धेरै उदाहरण विश्वमा छन् ।
चीन खुल्ला छ । भियतनाम, हङकङ, ताइवानदेखि जापानसम्म खुल्ला छन् । पाकिस्तानदेखि तुर्किमेनिस्तानसम्म पनि खुल्लै छन् । स्पेनले सरकारी कार्यालय, कलकारखाना, अत्याबस्यक नीजि कार्यालय खुल्ला गरिसकेको छ । जर्मनीले स्कुल, कलेज पनि खोल्ने निर्णय गरेको छ । इटलीले यहि सातादेखि लकडाउन खुलाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
लण्डन स्थित मेरा एक जना मित्रका अनुसार, बेलायत कोरोना भाइरसले आक्रान्त भएपनि लकडाउनकै कारण जनताले सास्ती भोग्न परेको छैन । मर्निङवाकदेखि किनमेलसम्म, अत्याबस्यक कार्यालय र अन्य गतिविधी नियमित नै छन् । सरकारले दुरी कायम गर्न जनतामा कडाइ गरेपनि जनजिवनलाई भययुक्त बनाएको छैन ।
अमेरिका, जापानमा आपतकाल घो’षणा भएपनि जनतालाई घर भित्र थुुनेको छैन । अब विश्वले ध्वस्त हुन थालेको अर्थतन्त्रप्रति ध्यान दिन थालेको छ । धेरै देशले लकडाउनको प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेका छन् । जहाँकी, यि मुलुकहरुमा दैनिक हजारौं नागरिक संक्रमित र दैनिक सयौं मरिरहेका छन् । तर, ति देशका सरकारले बु’द्धिमतापुर्वक बाँचेका नागरिकलाई कसरी मृ’त्युवाट जोगाउने र रोग पनि फैलिन नदिने भन्ने बारेमा सचेतपुर्वक कदम चालिरहेका छन् ।
जब दिल्लीले लकडाउन लगायो, अनि काठमाडौंले पनि लगायो । जब दिल्लीले सडकमा मान्छे धपायो, अनि काठमाडौंले पनि धपाउन सिक्यो । दिल्लीले के निर्णय गर्छ, काठमाडौंले पर्खने गर्छ । जब दिल्लीमा म’न्त्रीमण्डलको बैठक बस्छ, अनि काठमाडौंमा त्यसको तयारी चल्छ । दिल्लीले के गर्छ, काठमाडौंले पर्ख र हेर गर्छ । पछिल्लो दिनमा नेपालमा सरकार चलेको यसरी नै हो ।
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बाहिर मुलुकबाट आएका मात्र छन् । चैत ४ र ५ गते तेस्रो मुुलुक र केहि भारतबाट आएका मानिसहरुमा मात्र देखिएको छ । यतिसम्म कि उनिहरुसंग संसर्गमा भएकाहरुमा पनि रोग फैलिएको छैन । बागलुङका सबैको रिपोर्ट ने’गेटिभ आइसकेको छ । सनसिटीमा पछिल्लो देखिएका संक्रमित पनि चैत ५ गते युरोपबाट आएका थिए । अन्य स्थानबाट धमाधम आएका रिपोर्ट पनि नेगेटिभ देखिएका छन् । अर्थात नेपालमा संक्रमण फैलिएको छैन । किनकी यो २१ दिन लकडाउन अबधीले केहि न केहि पुष्टि गरिसकेको छ ।
उता, भारतले आज फेरि २१ दिन लकडाउन लगायो । यता काठमाडौंले दिल्लीको निर्णयलाई अनुमोदन गरयो । कता गयो, हाम्रो सार्बभौम निर्णय?
गरिब देशहरुले आन्तरिक रुपमा देश भित्र लकडाउन लगाउन हुँदैन नेपाल सरकारले किन नबुझेको ? हाम्रो सार्बभौम निर्णय खोइ ? जनता त्यसै त गरिब छन् । लकडाउनले झन मर्नेछन् । धनी देशहरुले पो धेरै बर्षसम्म जनताको लागि राहत, सेवा, सुविधा र उपचारका विधी अपनाएका हुन्छन् । उनिहरु लकडाउन धान्न सक्छन् । तर, हामी सर्तक हुने हो । देशै बन्द गरेर होइन, भन्ने किन बुझ्दैनौ ?
भारत तर्फको सिमाना पुरै बन्द गर । पुर्वदेखि पश्चिमसम्म लहरै सुरक्षाकर्मी राख । सर्तकता भनेको यहि हो । कसैलाई आउन नदेउ । नेपाल भित्र यो रोग फैलिएकै छैन । विदेशवाट आउनेलाई रोक्यो भने नेपालमा लकडाउन चाहिन्न भन्ने हिम्मत किन राख्न सक्दैनौ ?
गर्नुपर्ने काम गर्देनौ । भारतवाट सामान ल्याउँदा चालक र कर्मचारीको अनिवार्य स्वास्थ्य परिक्षण गरेर मात्र आउन देउ । अरु मान्छे अहिले आउन पुरै बन्द गरिदेउ । अनि, कहाँबाट छिर्छ कोरोना ? कोरोना भाइरस आकाशवाट उडेर आउने होइन भन्ने किन बुझ्दैनौ ?
मानिसले ल्याउने हो, मानिसलाई आउनै नदिएपछि देश भित्र किन चाहिन्छ, लकडाउन लकडाउन गर्नु परे कुनै सवेदनशिल क्षेत्र, जिल्ला मात्र वन्द गरिदेउ । जसरी चीनले वुहान शहर मात्र बन्द गरेको थियो । कोरोना नियन्त्रण गर्ने भनेर चीनले पुरै देश कहिल्यै ब’न्द गरेन । धेरै देशहरुले घरमा अनिवार्य बस्नु भनेपनि अनिवार्य गर्नुपर्ने काम रोकेका छैनन् । र जनतालाई सास्ती दिएका छैनन्।
फेरि पनि सोचौं, यो २१ दिनको लकडाउनले यो प्रमाणित गरेको छ कि, नेपाल भित्र कोरोना भाइरस फैलिएको छैन । सिमानामा कडाई गरौं । सरकारले जनतालाई भयभित पार्ने होइन, सजग र निर्देशिन मात्र गर्ने हो । लाग्छ , अहिले नेपाल सरकारले दिल्लीको आदेश बमोजिम जनतालाई भयभित वनाइरहेको छ ।
७ बर्ष अघिको कुरा हो ।
दिल्लीका एकजना ब्यापारीसंग मेरो भेट भएको थियो । केहि ब्यापारिक काममा उनि अम्वानी दाजुभाइसंग सहकार्य गर्छन् । उनले भनेका थिए,‘
As the Delhi order, Kathmandu operates. Nepal isastate like our Jammu and Kashmir. We like the people of Kashmir and Nepal. मैले भने, ‘No, no, Nepal isaseparate country, Nepal isasovereign country. What do you mean . He laughed again and said, “It is sovereign, this freedom is also talked about by Jammu and Kashmir.” Is Jammu and Kashmiraseparate country?
Just as Jammu and Kashmir are governed by the order of Delhi, so is Nepal. And how did Nepal becomeasovereign country.
उनको यो उत्तरको निकै प्रतिवाद गरें । तर, उसलाई अहिले पनि नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने लागेकै छैन । भारत भित्र उनि जस्तै नेपाल अलग देश हो भन्ने नबुझ्नेहरु लाखौं मानिस छन् । तर यता नेपाललाई दिल्लीकै आदेश पर्खनेहरुले शासन चलाएका छन् !!!
Previous दुःखद् खबर: को’रोना भाइरसभन्दा यशु ठुलो भन्ने च’र्चका पा’स्टरको कोरानाबाट मृ’त्यु!!
Next ग’र्भमै तु’हिएको भए पनि फरक नपर्नेहरु को’रोनाबाट जोगिएर पनि किन बाँच्ने?- स्वागत नेपाल